Nagu saabsan | Yunke China Information Technology Limited
Ku saabsan Dijital Shiinaha (Shirkadda Waalidka) Kooxda
Dijital Shiinaha (Shirkadda Waalidka) Group Co., Ltd. (lambar kayd: 000034.SZ).
20-kii sano ee la soo dhaafay waxay markhaati ka ahaayeen inaan hoggaanka u qabanno adeegyada isku dhafan ee Shiinaha oo dhan. Iyadoo la adeegsanayo nidaam bey'adeed oo daboolaya in ka badan 30,000 oo wada-hawlgalayaal ah, waxaan siinnay malaayiin shirkado ah iyo boqollaal milyan oo macaamiil ah alaabada IT-ga, xalal iyo adeegyo.
Xilliga "daruuraha + xogta weyn", waxaan ku sii socon doonnaa himiladeenna, waxaan ku dhisi doonnaa xawaaraha waxaanan ku dadaalaynaa inaan noqono horjooge bixiye adeeg bixiye iyo awood u leh is-beddelka ganacsiga.
Ku saabsan Digital China Group (shirkadda waalidka)
Yunke China Information Technology Limited (Magacii hore ee DIGITAL CHINA (Shirkadda Waalidka) NETWORKS LIMITED, DCN gaaban), sida hoosaad ka tirsan Digital China (Shirkadda Waalidka) Kooxda (Lambarka Hantidhawrka: SZ000034), waa kan ugu horreeya qalabka isgaarsiinta xogta iyo bixiyaha xalka. Ka soo qaadashada Lenovo, DCN waxaa laga bilaabay suuqa shabakadda 1997 iyadoo la adeegsanayo falsafadda shirkadda ee ah "U-jahaysan macmiilka, Teknoolojiyadda lagu hoggaamiyo iyo doorbididda Adeegga".
DCN waxay diirada saareysaa goobta isgaarsiinta xogta oo leh khadadka wax soo saarka oo buuxa, oo ay kujiraan adeegsiga Bedelka, wireless, router, amniga, iyo Cloud. Iyada oo ay sii wado maalgashiga RD, DCN waa hogaamiyaha bixiyaha xalka IPv6, shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha ayaa ku guuleysatay shahaadada IPv6 Ready Gold iyo soo saaraha ugu horreeyay wuxuu ku guuleystay OpenFlow v1.3 Shahaadada.
DCN waxay horey u siisay wax soo saar iyo xalal dhamaan gobolada Shiinaha iyo in kabadan 50 wadan oo aduunka ah, waxay aasaaseen iibka iyo xarunta adeega ee Europe, America, Russia, CIS, Koonfur-bari Aasiya iyo Bariga Dhexe. DCN waxay macaamiisha si guul leh ugu adeegtaa Waxbarashada, Dowlada, Howl wadeyaasha, ISP, Milatariga, iyo Shirkadaha.